ကျွန်ုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရများ (၇) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Aung San/Aung San Suu Kyi » ကျွန်ုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရများ (၇)
ကျွန်ုပ်နှင့် ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းအမှတ်တရများ (၇)
Posted by asiamasters on Aug 22, 2011 in Aung San/Aung San Suu Kyi, History | 8 comments
တစ်ရက်မှာတော့ အိန္ဒိယနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးက ကျွန်တော့ကိုသူ့ရုံးကိုဖိတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်က သူ့ကိုဂေါက်သီး ရိုက်သင်ပေးနေတာပါ။ ကျွန်တော့်ဘ၀မှာက ဂေါက်သီးရိုက်သင်ဆရာလဲလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုလည်း အခါအားလျှော်စွာ သင်ပေး နေတုန်းပါပဲ။ ဖိတ်ကြားခဲ့တဲ့သံအမတ်ကြီးကတော့ အခုသံအမတ်ကြီးရဲ့ အရင် နှစ်ဦးခန့်ကဖြစ်ပါတယ်။ နဲနဲတော့ကြာပါပြီ။ အိန္ဒိယသံရုံးဟာ ကုန်သည်လမ်းပေါ်မှာ တည်ရှိပါတယ်။ ပန်းဆိုးတန်းလမ်းနဲ့ ကုန်သည်လမ်းဒေါင့်မကျတကျလေးဖြစ်ပါတယ်။ သံအမတ်ကြီးကဖိတ်တယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်ကလည်း လေးလေးစားစားပဲ ၀တ်စားဆင်ရင်ပြီး၊ အချိန်မီရောက်အောင် သွားရ ပါတယ်။ သံရုံထဲကိုရောက်တော့ သူ့အတွင်းရေးမှုးကကျွန်တော့်ကိုစောင့်နေပြီး သံအမတ်ကြီးအခန်း အပေါ်ထပ်ကို ခေါ်သွားပါတယ်။ တံခါးဝမှာ သံအမတ်ကြီးက ပြုံးပြီးစောင့်နေပါတယ်။ ပြီးတော့ အခန်းဝမှာ ကပ်ထားတဲ့ ဓါတ်ပုံကြီးတစ်ပုံကိုပြပါတယ်။ ဒီဓါတ်ပုံက အခုကျွန်တော်တို့မြင်တွေ့နေရတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ရဲ့ အရာရှိဦးထုပ်နဲ့အပေါ်က လောင်းကုတ် အကျီနဲ့ပုံဖြစ်ပါတယ်။ သံအမတ်ကြီးက ကျွန်တော့်ကို ပြုံးပြီးညင်သာစွာမေးပါတယ်။ ဒီဓါတ်ပုံကဘာထူးလဲတဲ့။ ကျွန်တော်လည်းသေသေချာချာကြည့်ပါတယ်။ ဘာမှထူးတာမတွေ့ပါဘူး။ ဒီတော့ ဘာမှမတွေ့ဘူးလို့ပဲပြန်ပြောရတာပေါ့။ ဒီတော့မှ သူကပြောပါတယ်။ ဒီကုတ်အကျီကသမိုင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါအန္ဒိယနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေက ဗိုလ်ချုပ်ကို အမြဲအမှတ်တရဖြစ်စေခဲ့တာပါတဲ့။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ ဗိုလ်ချုပ်ဟာ အောင်ဆန်း-အက်တလီ စာချုပ်အတွက် အင်္ဂလန်ကိုသွားတဲ့အချိန်မှာ အ၀တ်အစားကောင်းကောင်းမပါပါ။ ဒါကို ဒီအချိန်က အိန္ဒိယခေါင်းဆောင်ကြီး နေရူး က သိဟန် တူပါတယ်။ ဒါကြောင့် ချက်ချင်းပဲ စီစဉ်ပေးလိုက်တာပါတဲ့။ ဒီတော့မှ ကျွန်တော်သဘောပေါက်သွားပါတော့တယ်။ ဒါအိန္ဒိယနိုင်ငံ မှ မြန်မာတို့အတွက် တန်ဖိုးမဖြစ်နိုင်တဲ့ သမိုင်းဝင်လက်ဆောင်တစ်ခုအနေနဲ့ကျန်နေရစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလိပ်တို့နဲ့စာချုပ်တစ်ခုရဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါ။ အင်မတန်စေ့စပ်သည့်လူမျိုးများဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကလည်းအခု အင်္ဂလိပ်တွေနဲ့ Edcuation ပိုင်းမှာ လုပ်နေတာလေးတွေရှိပါတယ်။ ဒါကြောင့်သူတို့အကြောင်းကတော့တော်တော်သိနေပါပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကိုတော့ တော်တော်ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်။ အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်ကို ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ အတူ လိုက်သွားခဲ့တဲ့ မြန်မာကိုယ်စားလှယ်တော် တွေဖြစ်တဲ့ ဦးစောနဲ့ သခင်ဘစိန်တို့ ကသဘောမတူပါ။ ဒါကြောင့် ယခု အောင်ဆန်း-အက်တလီစာချုပ်ကို ကြည့်မယ်ဆိုရင်၊ Not discerned by U Saw and Thakhin Ba Sein. လို့လက်မှတ်ရေးထားတာတွေ့ရပါမယ်။ ဒီနေရာမှာ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြောခဲ့တဲ့ရှားရှားပါးပါး အင်္ဂလိပ် စာကြောင်းလေး တစ်ကြောင်း နှစ်ကြောင်းရှိပါတယ်။ ဒါကတော့ အင်္ဂလိပ်ပါလီမန်မှာပြောခဲ့တာက My colleagues and I have come to Landon in response to the invitation of his majesty’s government in order to discuss the constitutional question of Burma. The demand of our people is complete independence. ဆိုပြီးဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာအနက်ကတော့ “ အင်္ဂလန်အစိုးရရဲ့ဖိတ်ကြားချက်အရ ကျွန်တော်နဲ့ အပေါင်းအပါတို့ဟာ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ မေးခွန်းများအတွက် လန်ဒန်သို့လာရောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးရဲ့ တောင်းဆိုမှု ကတော့ လုံးဝလွတ်လပ်ရေးဖြစ်ပါတယ်” လို့ဖြစ်ပါတယ်။
အင်္ဂလပ်အစိုးရဲ့ ဆန္ဒကတော့မြန်မာနိုင်ငံကို ဓနသဟာရအဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်တဲ့ (Common Wealth) အဖွဲ့ထဲမှာဆက်နေစေလိုတယ်။ ဦးစောနဲ့ သခင်ဘစိန်တို့ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံမှာ လမ်းပန်းအဆက်အသွယ်နဲ့ အခြေခံ အဆောက်အဦတွေမပြီးသေး၊ ဒါတွေပြီးတော့မှ လွတ်လပ်ရေးယူသင့်တယ်လို့ယူဆတယ်။ အင်္ဂလိပ်အစိုးရကလည်း မြန်မာနိုင်ငံလုံးဝလွတ်လပ်ရေးပေးဖို့စောသေးတယ်လို့ယူဆပါတယ်။ ယူဆရတဲ့အကြောင်းလည်းရှိပါတယ်။ လွတ်လပ်တဲ့ ဒီမိုကရေစီဆိုတာက နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေရဲ့ နားလည်သဘောပေါက်မှုနဲ့ လူနေမှုအဆင့်အတန်းလည်းအများကြီးဆိုင်ပါတယ်။ ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးငယ်ကျိုးငယ်နာတွေဖေါ်ကုန်ရင်တော့ သတ်ကုန်ကြတော့မှာဘဲလို့ သိထားပါတယ်။ ဆက်ရေးပါမည်။
တော်တော်တော်တဲ့ asianmasters ဘဲ…..ဂါက်သီးရိုက်သင်ဆရာလဲလုပ်ခဲ့ Chess လဲထိုးတတ်….ရေးတာလဲအနှစ်တွေ
..ဘာတဲ့ …..”ဒီမိုကရေစီဆိုပြီးငယ်ကျိုးငယ်နာတွေဖေါ်ကုန်ရင်တော့ သတ်ကုန်ကြတော့မှာဘဲလို့” အင်းနော်……ကျွန်တော်တို့　မြန်မာလူမျိုးများကလည်း..သမိုင်းမှာထဲက…မတဲ့ကြဘဲကိးု။
ကျေးဇူးပါလို့ ..ဗိုလ်ချုပ်နဲ့ ပါတ်သတ်တာတွေ ဖတ်ခွင့်ရလို့ ပါ…
ကျနော့် သူငယ်ချင်းတေါ ကလူငယ်လေးတွေ ဆိုတော့သူတို့ ကမသိကြဘူးလေ…
ဘုန်းကြီးတွေ နဲ့ လည်းမိတ်ဆွေတွေပါဘဲ….ပြောချင်ရာပြော..အတွေးနဲ့ အသိတွေ ဖလှယ်ရအောင်
facebookမှာအဖွဲ့ တွေ လုပ်ထားတာပါ…..
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..အခုလို ဖေ့ဘုတ်က ကျနော်ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပြတိုက်ထဲ စာလာရေးပေးတာကိုရောပေါ့
အင်းပေါ့နော်။ ဗိုလ်မှူးတို့တပ်ထဲမှာ ဂေါက်သီးတွေပေါတော့ ဂေါက်ရိုက်လို့ကောင်းမှာပေါ့။ ကျနော်တို့ ပုဆိန်ရိုးအသိုင်းအဝိုင်းမှာတော့ ရှောက်သီးတွေပေါတယ်၊ လျောက်ပြောလျောက်ရေးလျောက်လုပ်ကြလို့။ (ကျနော်ကခပ်တည်တည်သမား)။ ဂေါက်သမားတွေကတော့ ရှောက်သီးဆို မကြိုက်ဘူး၊ အတော်ချဉ်ဆိုပဲ..။
ဓာတ်ပုံတွေ ဘာတွေကော ရိုက်ထားတာတွေရှိသေးလား… ရှိရင် တင်ပေးမယ်ဆိုရင် ပိုမို ပြည့်စုံတဲ့ ပိုစ့်ကောင်းတစ်ပုဒ် ဖြစ်သွားမှာပါ။ ဒီလို မသိခဲ့တာတွေကို မျှဝေပေးတဲ့အတွက်လည်း ကျေးဇူးတင်မိပါတယ်။
ဖေါ်သာရေးဗျာ…။ ဒီလိုပွင့်လင်းမြင်သာရေးထားမှ.. ဖြစ်တော့မှာ..။
မြန်မာဆိုတာ.. ၂ယောက်ရှိရင်.. ၂ဖွဲ့ကွဲတတ်တဲ့လူမျိုးမဟုတ်ဖူးလို့.. ကျုပ်တော့..အမြဲပြောတယ်..။
မြန်မာဆိုတာ.. ၁ယောက်ထဲ.. ၃ယောက်ကွဲနေတဲ့လူမျိုးဗျ..။
အခုဖြစ်နေတာတွေက..မကောင်းတာတွေကို.. ရှေးကံမကောင်းလို့ပါဆိုပြီး..အရင်ဘ၀က.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပုံချတယ်..။(၁ယောက်)
… အဲဒီလွှဲချလူအဖြစ်… ပစ္စုပ္ပန်မှာ. လုပ်ချင်တာလုပ်တဲ့.. လူလာဖြစ်နေတယ်.။(၁ယောက်)
လုပ်သမျှတွေကို.. ကံကံအကျိုး..ကောင်းတာ/မကောင်းတာလုပ်..ကောင်းတာ/မကောင်းတာဖြစ်ပါတယ်…ဆိုပြီး.. လာမဲ့ဘ၀က..ကိုယ်ကောင်းအောင်ချည်း.. လုပ်နေတော့တာပဲ..။ ပုတီးလေးတစိတ်စိတ်နဲ့ပါလိုက်သေး..။(၁ယောက်)
အဲဒီအတွင်းစိတ်အခြေခံနဲ့… ရှေးသက်ဦးဆံပိုင်ပဒေသရာဇ်ခေတ်ကလည်း.. တိုင်းရင်းသားတွေ.. မင်းဆွေမင်းမျိုးတွေနဲ့..အချင်းချင်း… စစ်ဖြစ်..ချ..။
ဆွေမျိုးတွေ..လည်မျိုတုတ်နဲ့ရိုက်.. ဂျီနိုဆိုက်လုပ်တာအကြောင်းပြ… အင်္ဂလိပ်ဝင်တော့.. ဘုရင်က.. အင်္ဂလိပ်တော်လှန်သူသူပုန်ဆိုပြီး အမိန့်ထုတ်.. အချင်းချင်း.. ချ..။
ဖဆပလခေတ်ရောက်တော့.. အဖြူအနီရောင်စုံတွေဖြစ်ပြီး… ချ..။
မဆလခေတ်ေ၇ာက်တော့… တော်လှန်ေ၇းကောင်စီဝင်.. တွေ..၊ ဦးအောင်ကြိး။ ဦးအောင်ရွှေ.. မျက်မှန်ကြီးတင်ဦးတို့ကို.. ချ..
န၀တခေတ်ရောက်တော့… ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမောင်..အပါအ၀င်.. န၀တထိပ်တန်းအဖွဲ့ ဝင်တွေအားလုံး…ကို…ချ…။
နအဖခေတ်ရောက်တော့… ဦးနေ၀င်းကို… ချ..။
သဂျီးကတော့ အပြင်ကနေပြီး လက်သီးလက်မောင်းတန်းပြနေပြန်ပြီနော့… အေးအေးဆေးဆေး ထမင်းစားပါရစေဦး….
သူကြီးဆက်လေးဗျာ အခုအစိုးရက ဘာဖြစ်တာလည်း
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ပို.စ်ပိုင်ရှင်ရယ် ဗဟုသုတလည်း ရစေပါတယ် သူတို.အတွက်
ဒီလောက် သမိုင်းဝင်ဖြစ်လိမ်.မယ်ဆိုတာ တကယ်မသိခဲ.ပါဘူး
အင်္ဂလိပ်စာ ဆရာ တယောက် ပြောတာ ကြားဖူးတယ်။ သေချာ အတိအကျလည်း မမှတ်မိတော့ဘူး။
ဗိုလ်ချုပ်က တက္ကသိုလ် ကျောင်းသားတုန်းက အညာသားမို့ အင်္ဂလိပ်စာ ခပ်ညံညံနဲ့ စကားတက်ပြောတာ အားလုံး ၀ိုင်းအော်ကြတာတောင် သူပြောချင်တာ ဆုံးအောင် ပြောပြီးမှ ဆင်းသွားတယ်တဲ့.. သတ္တိကတော့ ကောင်းတယ်တဲ့။ နောက် ထပ် ၁နှစ် ၂နှစ်ဆိုလား.. အဲဒီ အချိန်ကျတော့ တလုံးတလေတောင် မထောက်ဘူး လုံးဝကို ညက်နေအောင် ပြောနိုင်နေပြီ။ အဲလို ချီးမွမ်းတာမျိုး ကြားဖူးတယ်။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူး။ ပါးစပ်ပြော လို ဖြစ်နေလို့။